UMnu u-Kapil Nairain nomQondisi-Jikelele we-WHO uDkt u-Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Umfundi Wezobudokotela Ekuholeni Umkhankaso Wentsha Yase-Afrika Wokulwa Ne-COVID-19
Umfundi wonyaka wokugcina kwezobudokotela e-Nelson R Mandela School of Medicine yase-UKZN uMnu u-Kapil Narain uqokelwe ukuba nguSihlalo we-Federation of African Medical Students Association (i-FAMSA) COVID-19 Technical Working Group (i-TWG), okungumkhankaso wezwekazi lonke wokulwa nobhubhane i-COVID-19. Leli komiti linamazwe angamalungu ayi-15 ameleleke kahle ngokobulili nabahumushi ukuqinisekisa ukuthi wonke amazwe ase-Afrika ayaluthola ulwazi oluvela kuleli komiti. U-Narain nguyena yedwa owaseNingizimu Afrika kuleli komiti.
Ukhethwe ngenxa yamagalelo akhe kwezocwaningo nobuholi.
Emisebenzini ka-Narain kukhona ukuhlela indlela edidiyekile ebheka izimo zobhubhane emhlabeni nasezweni ngokuhola izingxoxo emikhankasweni nokuqinisekisa ukuthi intsha iseqhulwini lwaleyo mikhankaso.
‘Ngithakasile ngokuqokelwa kulesi sikhundla kanti ngijabulile ngokusebenza nabafundi bakwezinye izindawo e-Afrika ukuthi zibambe iqhaza elimqoka ekulweni nobhubhane ngocwaningo, ulwazi, ukushabasheka nobuciko nokubambisana nezinye izinhlangano zezempilo. Okwamanje ubhubhane selufinyelele ezigidini ezinhlanu, abantu abangama-300 000 abashonile emhlabeni. Nakuba iMelika inesibalo sabantu abagulayo esikhulu kepha i-World Health Organization (i-WHO) ixwayisa ngokuthi yise-Afrika lapho lidlange khona igciwane. Loku kukhathaza kakhulu uma kubhekwa ukuntenga kwezinhlelo zezempilo kuleli zwekazi. Okudingeka kakhulu manje ukuthi sibhukule sonke!’
I-TWG ihlose ukuqinisekisa izitshudeni zezobudokotela ziseqhulwini lokubhekana ne-COVID-19 e-Afrika yonkana.
Emisebenzini yayo kukhona okungezansi:
• Ukwabelana ngolwazi nge-COVID-19 ukunqanda ukusabalalisa izinto ezingekho ngobhubhane.
• Ukwazi ngemiphumela yocwaningo olusha nezeluleko ezihambisana ne-WHO.
• Ukuhola abafundi bezobudokotela base-Afrika yonke ngokwenza ucwaningo nge-COVID-19 ngokuqhamuka nezindlela nemigomo okufanelekile.
• Ukwabelana ngolwazi ngokuthi abafundi bezobudokotela base-Afrika benzani ekulweni ne-COVID-19.
• Ukubona imizamo yabasebenzi abehlukene bezwekazi empini ne-COVID-19.
• Ukubalula izinselelo amazwe ase-Afrika abhekene nazo nokungasiza ekuqhamukeni nezisombululo.
• Ukusebenzisana nomkhandlu wezikhulu ze-FAMSA nezitshudeni zezobudokotela e-Afrika empini yokulwa ne-COVID-19.
I-TWG ike yaba nezingxoxo nenxusa lentsha ye-African Union (i-AU) uNks u-Aya Chebbi. I-FAMSA iyilungu le-African Youth Front, iqembu lezishoshovu ezehlukene elinika intsha yase-Afrika ithuba lokuba neqhaza ekusebenzeni kohlelo i-African Continental Strategic Plan for the COVID-19 Pandemic. NgokomQondisi we-African Centres for Disease Control (i-CDC), uDkt u-John N Nkengasong, ‘Intsha yase-Afrika imqoka ekulweni ne-COVID-19.’
NjengoSihlalo u-Narain ubeyingxenye yesithangami enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe nodokotela abancane nabafundi abenza izifundo zobudokotela mhla we-12 kuNhlaba obuhlelwe yi-Operation Smile, inhlangano engenzi nzuzo egxile osizweni lokuhlinza mahala. Ushiyelane inkundla nabaholi abancane base-Cameroon, e-Canada, eMelika, e-Greece naseJalimane ukubhunga ngokuthi izitshudeni zenzani ukulwa ne-COVID-19.
I-FAMSA yasungulwa ngowezi-1968 ukukhuthaza ubumbano phakathi kwabafundi bezobudokotela base-Afrika. Wumfelandawonye ozimele onamalungu angama-8 000 asemazweni acela kuma-30, kanti yaziwa yi-WHO ne-AU njengesigcawu esisemthethweni esikhulumela abafundi bezobudokotela zase-Afrika. Umbono wayo uthi: ‘Ukuba wukhukhulelangoqo onamandla wezitshudeni zobudokotela, owazi izinto zezempilo emhlabeni nobhekana nezinselelo zamanje zomkhakha wezobudokotela nowezempilo.’
Umfundi WezeMasitazi Uqokelwe Kowokuyobhala Phesheya Ohlonishwayo
Uthisha wezesiNtu Ubheka Eyokufunda Ngobuchwepheshe Bezokuxhumana Ngesikhathi se-COVID-19